Wararkii ugu dambeeyay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta degmada Warta Nabadda | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka HNN Wararkii ugu dambeeyay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta degmada Warta...
Wararkii ugu dambeeyay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta degmada Warta Nabadda
Talaaddo-May-14-2019(HNN) Gaari nooca Noha loo yaqaan, islamarkaana laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu dhuftay ilinka hore ee xarunta degmada warta nabadda.
Qaraxa oo ahaa mid aad u xoog ayaa bur-buriyay dhamaan dhismayaasha xarunta.
Khasaara ka dhashay weerarka oo aan weli si rasmi ah loo ogeyn ayaa wararka hordhac ah sheegayan in ay afar ruux ku geeriyoodeen.
Xarunta waxaa maalmihii la soo dhaafay ka socday barnaamij raashin qeybin ah oo loogu talagalay dadka masaakiinta ah, walow maanta aysan jirin cid joogtay xilliga uu qaraxa dhacayay.
Xoghayaha degmada Warta-nabada Cali Aadan Warsame ayaa la sheegayaa in uu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii maanta.
Ilaa hada ma jirto cid sheegatay mas,uuliyada weerarkaan, balse Al shabab ayaa horey u sheegatay weeraro noocaan oo kale ah oo lagu qaaday xarumah degmooyinka, Wadajir, Howlwadaag iyo Degmada Hodan.
Xigasho Mohamed Abdullahi Rooble.
Previous articleAKHRISO: Duqa Muqdisho oo fal-danbiyeed ku tilmaamay Imtixaanka la xaday
Next articleDHAGEYSO: Ardeyda Baladweyne oo loogu baaqay inay is dajiyaan